7 Hapana Bullsh * t Nzira dzekumira kuita godo muhukama hwako - Ukama
7 Hapana Bullsh * t Nzira dzekumira kuita godo muhukama hwako
'Ndiani murume iyeye waari kutaura naye?'
'Ari kumuongorora here?'
'Pane chiri kuitika here pakati pevaviri ava?'
'Sei vasina kundibvunza kana ndaida kuenda?'
Ahhh, iyo ine godo pfungwa mukuita. Isu tese tanga tiripo. Ndinoziva une nekuti nei zvimwe zvaungave uchiverenga chinyorwa ichi?
Iwe unoona, godo ipfungwa yakajairika / kunzwa combo…
… Asi haina hutano zvakanyanya.
Zvinogona kutitadzisa kuzvinyudza muhukama, vangave vepedyo kana chaicho platonic .
Kuwedzera kusavimba, godo, uye kusagadzikana muhukama hwako, hunowedzera dambudziko - rako iwe nemumwe munhu.
Asi usazvirove pachako nezvazvo. Ndizvozvo nhanho imwe Ipapo. Hapana chakanaka chinombouya kubva pakuranga iwe pachako.
Iwe unoona, isu hatisi kunyatso kudzora kwedu kwepfungwa maitiro kune chero mamiriro akapiwa. Kunyangwe isu tichigona kukwanisa kurerutsa manzwiro edu uye kusarudza kubata nawo neimwe nzira, isu hatigone kudzora nguva uye sei uye sei.
Ini handikwanise iwe haugone munhu ari mhiri kwemugwagwa haagone.
Iwe unofunga kuti uri wega mukunzwa nenzira iyi?
Zvino hazviiti kuti unzwe kungova nani zvishoma here kare?
Uine izvi mupfungwa, ungakwanisa sei kukunda nemanzwiro egodo anomuka mukati?
Tine mazano mashoma ekuti tingachengeta sei chikara chine maziso egirini chakatarisa…
1. Nzwisisa Mudzi Wegodo
Chii chinonzi godo, chaizvo?
zvinoratidza kuti murume wako haachakudi
Ndiko kutya kutya kurasikirwa nechimwe chinhu chauinacho kare, kana kutya kwekusawana chinhu chaunoshuvira uye icho vamwe vanacho (vamwe vangati iyi yechipiri kunzwa godo, asi zvese zvakavakirwa mukutya neimwe nzira kana imwe).
Godo ndiyo nzira iyo yako ego inopindura kune tyisidziro - inoonekwa kana yechokwadi.
Icho chikamu chemhindumupindu. Yakavanzwa kumwe kunhu mukati medu geneti kodhi ndiko kuraira kwekutanga kurarama uye kupfuudza magene edu kuchizvarwa chinotevera.
Izvo zvinongoitika kuti vamwe vanhu vanogona kuonekwa sevanogona kutyisidzira hunhu uhwu.
Asi kupfuura izvi, godo rako rinouya kubva pane zvako zvekare zvakaitika. Ndicho chikonzero nei vamwe vanhu vachisangana negodo rakawandisa kupfuura vamwe. Vakave nekupfuura kwakasiyana.
Iwe uri kuramba uchiumbwa nezviitiko muhupenyu hwako. Pane imwe nguva munguva, chimwe chinhu chakaitika chakakonzera kurwadziwa uye kurwadziwa uku ikozvino kunoita kuti utye chinhu chimwe chete ichocho chichiitika zvakare.
Godo rako rinogona kutove nemidzi yakawanda, richisundira kunze kuburikidza nezvako zvakapfuura sezvinoita midzi yemuti muvhu.
Pamwe wakakuvadzwa kakawanda, nenzira dzinopfuura imwe, nevanhu vaunoda uye vanoti vane hanya newe.
Saka nhanho yechipiri (rangarira, nhanho yekutanga yaive yekusazvirova iwe pachako), ndiko kunyatsoongorora kuti godo rako rinobva kupi.
Ndechipi chinonyanya kukonzera godo rako? Ndiye here mumwe munhu, chinhu, nzvimbo, kana chiitiko chinowanzoitika chinokupa iwo marwadzo anotyisa emanzwiro?
Tichitarisa kumashure kune yako yakapfuura, izvo zvinhu zvakava sei zvinokonzeresa pakutanga? Chii chakakuvadza chawakasangana nacho chine chekuita navo?
Chaizvoizvo funga nezvazvo. Nyora pasi kana zvichikubatsira kuti uwane mufananidzo wakajeka. Pamwe unototarisa mashoma maseshoni pamwe nemupi wezano wezano.
Iyi nhanho yakakosha nekuti nekunzwisisa godo rako midzi munguva yakapfuura, iwe unogona zvirinani kutarisana naro munguva ino.
2. Taura Nezvo (Nzira Yakarurama)
Unogona kufunga kuti chinhu chakanak kuita kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiziva
Iwe haugone kufunga zvakanaka kana manzwiro ako ave kukwirira, uye hauzokwanise kutaura manzwiro aunoita zvechokwadi.
Asi izvo kuda batsira kuburitsa manzwiro aya neimwe nzira.
Pane kudaro, tora nhanho kumashure uye taura kune shamwari yepedyo kana mudiwa iwe waunovimba naye chaizvo.
Iva akatendeseka sezvaunonzwa iwe uchigona kuva. Edza kuburitsa zvese kunze uye upe munhu mamiriro ezvinhu aanoda kuti anzwisise kuti unonzwa sei.
Iwe unokwanisa vane zvikamu zvekurasa zvekurasa nemumwe munhu, asi kuti mumwe munhu agone kukubatsira, ivo vanofanirwa kuziva zviri kuitika chaizvo.
Tanga nemanzwiro auri kuita uye taura nezvekuti sei.
Unoitira godo here munhu chaiye muhupenyu hweumwe munhu kana kungofunga kwemumwe munhu kukutengesa neimwe nzira?
Unofanirwa kuvhurika uye nekutsanangurwa sezvaungave - kutaurirana chikamu chakakura chemaitiro edu maitiro edu pachedu.
ndiani finn balor kufambidzana
Kazhinji, iko kuita kwekutaura zvinonzwika kune mumwe munhu kwakaringana kukubvumidza iwe kuronga pfungwa dzako. Ivo vangangobvunza mibvunzo yekuzeyedza kujekesa zvauri kutaura uye izvi zvinoita kuti iwe ufunge zvakanyanya pamusoro pemanzwiro aunazvo.
Izvi zvinokubatsira iwe kuvaka pane pfungwa dzawakaisa pasi pabepa mune yakapfuura nhanho.
Maitiro Ekuziva Uye Kuita Nehukama Kushushikana
Kuvimbika Muhukama Kunorevei Chaizvo?
Nzira Nomwe dzeKuchengetedza Zvakachengeteka Kushushikana Kwemanzwiro Muhukama
Icho Chiri Rudo Rwechokwadi Kana Icho Chisina Hutano Chisungo?
Nei Ukama Huri Basa Rakaoma Zvakadai?
3. Icho Chinyorwa Chaicho Chaicho Here?
Zvingave kuti une godo nechimwe chinhu chakakodzera, kana kuti zvinogona kunge manzwiro ako ari chaiwo, asi ari nezve chimwe chinhu chawakagadzira iwe mupfungwa dzako.
Kana zviri zvekupedzisira, usazvipa mhosva - tese tinogadzira nyaya mupfungwa dzedu.
Manzwiro anokonzeresa anogona kunge asiri kubva pane chaiko chiripo, asi nekuti anogona kunge akavakirwa pazviitiko zvako zvekare (sezvakakurukurwa pamusoro), zvichiri kushanda.
Saka… ndinoona zvakakodzera kukuyeuchidza nezve nhanho yekutanga - usazvirove iwe pachako.
Usazviudza izvozvo wakapusa yekunzwa godo. Usazvipa mhosva.
Iwe unogona kugadzirisa nzira dzekutarisana negodo iri risingabatanidze kuzvishora.
Ehezve, dzimwe nguva manzwiro ako akavakirwa pane zvinonetsa zvechokwadi…
4. Haisi Ini, Ndiwe
Chikamu chekuyedza zviito zvako pachako chiri kushanda panowanikwa nyaya yacho.
Zvinogona kunge kuti dambudziko rinogara chaizvo nemumwe munhu uye ivo vanofanirwa kuvepo kuti vakubatsire kuburikidza naro.
Iwe unogona kuita godo rekuti padyo sei mumwe wako ari kune mumwe wavo (vakomana kana vasikana) shamwari. Izvi zvinogona kunge uri iwe unogadzira mutambo mumusoro mako, kana iwe unogona kunyatso kuve nerondedzero yenguva dzavakambozvibata nenzira dzisina kukodzera zvishoma.
Kana iri yekupedzisira, iwe unofanirwa kutsvaga nzira yekugara pasi nemunhu akabatanidzwa uye kugadzirisa iyi nyaya.
Zvichida ivo vanofanirwa kuongorora maitiro avo uye vadzivise zvinhu zvingakushatirise, kunyangwe vafunge kana kutaura zvisina mhosva.
Maitiro akanakisa ndeekutaurirana pachena, asi nerudo rukuru netsitsi sezvinobvira. Edza kuisa zvaunonzwa kudivi rimwe chete kwechipiri uye wozviona kune iwo munhu zvavari.
Unofanirwa kuve wakasvinura-pfungwa nerudzi urwu rwechinhu, sezvo iwe usingakwanise kungokumbira mumwe wako kuti arege kushandisa nguva neimwe yeshamwari dzavo.
Izvo iwe zvaunogona kuita kutsvaga yepakati-pasi iyo inoita kuti unzwe zvirinani pasina kukumbira izvo vanochinja maitiro avo zvachose.
5. Hausi Iwe, Ndini
Ehezve, isu tese tinofanirwa kubvuma izvo, dzimwe nguva, ndisu.
Dzimwe nguva shamwari kana vatinoshanda navo havaite chinhu kutiita kuti tiite godo. Zvese zvinobva mukati medu pfungwa.
Unogona kuzviwana uchitsamwira shamwari yepedyo pasina chikonzero kunze kwekusaziva kwako. Zviri nyore kuita, asi zvinogona kuva zvine chepfu kwamuri mose.
Unogona kuzviwana iwe kusafarira shamwari yako , kunyangwe iwe uchivada, nekuti zvinomiririra izvo zvinhu zvaunoda iwe muhupenyu hwako.
Izvi zvakasikwa, uye vazhinji vedu tinokwezvwa nevanhu vatinoona sevanoshuvira. Kuitira shanje chimiro cheshamwari yako kana hunyanzvi kana basa zvakajairika, asi kwete kana ikatanga kutora uye ichikonzera nyaya pakati pako.
6. Kutarisana Nayo
Kutarisana nemanzwiro ako chimwe chinhu chakapetwa kaviri, uye chinofukidza zvese zvatataura nezvazvo kusvika zvino.
sei kurega kuva musikana anonamira
Gadzira izvo zviri kuitika, shanda kuti ndiani anoda kuchinja izvo, uye wozozviita kuti zviitike.
Izvi zvinogona kureva kugara pasi nemumwe wako uye kuronga nzira yekuona kuti unonzwa wakachengeteka.
Zvinogona kunge zvichitove kuona kuti hukama hwacho hauna kukodzera iwe panguva ino nenguva kana iwe usina kuchengetedzeka uye kusavimba .
Rangarira kuti danho iri rakaoma….
… Chaizvo, zvakaoma chaizvo.
Iwe unozoda vadiwa vakakukomberedza kuti uwane rutsigiro - kubvuma manzwiro ako akawoma zvakakwana, ndoda kuzvitarisana nawo.
Asi unogona kuzviita, uye uchazviita. Uye kunyangwe zvisingaite sezvinoita, uchanzwa zvirinani.
7. Funga Zvakanaka
Zvinogona kuve zvakaoma chaizvo kuona zvakanaka mune aya mamiriro ezvinhu, asi irimo mune imwe nzvimbo!
Iwe unonzwa godo rekuti shamwari yako iripedyo sei kune mumwe munhu nekuti unovada zvakanyanya uye unoda ivo vese kwauri.
Izvi hazvinyatso kuitika, hongu, asi iwe unogona achiri kufunga nezvezvakanaka - ivo vainawo iwe uye vanoda kuva navo iwe .
kuita sei kuve nerudo muhukama
Chero munhu mukuru anokwanisa kugumisa hukama kana vasingachazvidi, uye iwe unofanirwa kuvimba kuti mumwe wako angaite izvozvo.
Izvo zvekuti iwe uri muhukama nemumwe munhu waunofarira nezvake zvakanyanya - uye anokuda zvakanyanya zvekuti ivo vari kukubatsira kuburikidza negodo nekusachengeteka - chinhu chakakura.
Kubata nemanzwiro egodo kunogona kushatirisa kwazvo, ndosaka kuva akatendeseka newe pachine nguva zvichikosha.
Nekukurumidza iwe unokwanisa kugamuchira aya manzwiro, nekukasira iwe unogona kusangana nawo woenderera mberi.
Rangarira kuti aya manzwiro anowanzo simuka nekuti une hanya nemumwe munhu, izvo zvaunogona kutendeuka kuti uve wakanaka.
Nekutaura nezve idzi nyaya, mumwe wako, shamwari, kana waunoshanda naye achadaro kukuremekedza uye uve wakasununguka kutsvaga nzira dzekubatsira.
Kuudza mumwe munhu mwedzi mitanhatu pasi pemutsara kuti iwe wakatsamwira chimwe chinhu nezvavo nguva yese?
Hazviendi pasi futi!
Iva akatendeseka, vhura moyo wako uye uve wakagadzirira kuisa mune rimwe basa rakaoma. Iwe uchanzwa zviri nani zvakanyanya.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezve godo raunonzwa? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
sei ndichifarira kuva ndega
maitiro ekuita nevanonyepa muhukama
chii chinonzi deal breaker muhukama
kana shamwari yepamwoyo ichikutengesa